George Anderson - WRSP
George na oge a
1952 (August 13): George Anderson, Jr. mụrụ na Long Island, New York.
1959: Nleta mbụ nke Anderson site na ngosipụta ọ kpọrọ "Lilac Lady" mere.
1960s (Mbubreyo): Anderson nwetara ndụmọdụ gbasara mmụọ ma chọpụta na ugha na paranoid
1973: Anderson sonyeere otu mpaghara a raara nye ikike nke uche.
1978: Anderson ghọtara ọkpụkpọ ya iji nyere ndị ikwu na ndị enyi na-eru újú aka.
1980 (Ọktọba): Anderson gosipụtara dị ka ọbịa na Joel Martin Gosi.
1981: Anderson na Joel Martin bidoro imekọ ihe ọnụ Ọwa nke uche na netwọk Viacom.
1987: Joel Martin na Patricia Romanowski na-edekọ akwụkwọ Anyị Anwụghị: Mkparịta ụka George Anderson na Akụkụ Ọzọ.
1990s: Anderson malitere inwe nzukọ ọgụgụ nzuzo naanị ya, guzobere George Anderson Grief
1995: Ndị fọdụrụ na ezinụlọ Anne Frank kpọrọ Anderson na Holland ịkpọrọ otu ọgụgụ.
1997 (Septemba 1): Mmemme Nkwado George Anderson na-ewute webụsaịtị ya.
2001: ABC kwupụtara pụrụ iche, Kpọtụrụ: inggwa Ndị Nwụrụ Anwụ Okwu.
Na August 13, 1952, George Anderson, Jr. mụrụ na Long Island, New York na nne na nna George na Eleanor Anderson. Onye nke ọdụdụ n'ime ụmụaka anọ, Anderson, Jr. ezinụlọ gụnyere ụmụ-nne-nne-nne-nwanyị abụọ na nwanne nwoke nke tọrọ ya afọ abụọ. Ndi Andersons bu otu ọnụ ọgụgụ dịtụ, ezinụlọ na-arụ ọrụ. Pennsylvania Railroad were ya n'ọrụ dị ka odeakwụkwọ na-ebu ibu ruo mgbe ihe ọghọm nwere nnukwu nkwarụ ma mee ka ọ hapụ ọrụ ya. Ọ ga - emecha chọta ọrụ na KLM Airlines wee, n'agbanyeghị na aka adịghịzi enye aka na ndụ ya niile, nwee ike ịkwado ezinụlọ. N'ịbụ ndị tolitere na ezigbo okpukpe Katọlik, Anderson na ụmụnne ya ndị nwoke atọ gara ụlọ akwụkwọ na Our Lady of Perpetual Help na Lindenhurst, New York. Nwatakịrị na-eme ihere nke na-akọ enweghị mmasị maka ihe ndị masịrị nwata nke ọgbọ ya, Anderson gbalịsiri ike n'ụzọ mmetụta uche, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na agụmakwụkwọ n'ogologo oge agụmakwụkwọ ya. Mgbe ọ dị afọ isii, ọ butere ọnya ọkụkọ, ihe omume nke ga-emesịa kewapụ ya na ndị ọgbọ ya ma setịpụ usoro ndụ ya niile. Ọ bụ ezie na ị na-ebute nje virus ọkụkọ bụ ihe a na-ahụkarị n'etiti ụmụaka na ndị a na-agwọkarị, Anderson azaghị ọgwụgwọ. N’ihi ya, ọ butere encephalomyelitis, nje na-akpata mbufụt nke ụbụrụ na ọgidigi azụ. Dika nje oria na aru ya, Anderson enwekwaghi mmasi na aka ya ma ndi ezinulo ya wee tua egwu onwu. Site na ọgwụgwọ, Anderson nwetaghachiri ike muscular obere oge mgbe nke ahụ gasịrị, mana ahapụghị ya ije ije ọnwa atọ. Otú ọ dị, dị ka Anderson na-akọwa ya ugbu a, mpaghara ndị ọzọ nke ụbụrụ ya na ndị ọzọ na-agagharị agagharị malitere ịkwụ ụgwọ maka ụbụrụ ụbụrụ nke ọrịa ahụ mebiri, n'otu ụtụtụ kwa, ọ tetara n'ụra iji ụkwụ ya mee ihe ọzọ. Anderson ejiri nlezianya jiri otu nkọwa a mee ihe maka akaụntụ ahụ karịrị nke ọ malitere ịmalite n'oge na-adịghị anya mgbe ọ nwụsịrị.
Ọ na-echeta na otu nwanyị yi uwe mwụda na-acha odo odo nke biliri ọtọ n'ụkwụ ihe ndina ya, kpọtere ya n'ụra ya n'otu abalị. Ọ bụ ezie na nwanyị ahụ ekwughị okwu ma funyụọ mgbe minit ole na ole gasịrị, Anderson na-ekwu na ya nwere ike ịnweta mkpụrụ obi ya ma jiri ekwentị kpọọ ozi na-enye obi ụtọ. Nwanyị ahụ, bụ onye Anderson kpọrọ "Lilac Lady," malitere ịpụta nke ọma na ọnwa ndị na-esote, ọ bụ mgbe ahụ ka ọ gwara ndị mụrụ ya nkwukọrịta ndị a. Ndị nne na nna Anderson nabatara akụkọ ya na mbụ dị ka echiche efu nke nwata, mana n'oge na-adịghị anya, ha nwere obi erughị ala ka ọ na-ekwusi ike na ọ na-ekwupụta na ọ na-ekwu banyere ya oge niile. Agbanyeghị, kama ịkwụsị, ọhụụ ndị ahụ gara n'ihu, Anderson bidokwara ịkọwa ihe ọ weere dị ka mmụọ nke onye ahụ nwụrụ anwụ. Ọ na-echeta ịgwa onye agbata obi ya banyere nleta nke nne nne nwata nwoke ahụ nwụrụ anwụ. Nne na nna nwata ahụ were iwe na ụjọ site na akụkọ Anderson nke, n'akụkụ nkwenye nke ndị mụrụ ya, mere ka ọ ghara ịkọkọrịta ahụmịhe ya wee mee mkpebi siri ike idebe ha na nzuzo.
N'ikpeazụ, mgbe ọtụtụ nleta gasịrị, a kọrọ na Anderson kwenyesiri ike na ihe ndị a bụ ihe nkịtị na onye ọ bụla nwere ahụmahụ yiri nke kọntaktị ahụ. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, Anderson natara ọhụụ ebe nwa okorobịa bụ Louis nke XVII gbagara England n'etiti Mgbanwe Ọchịchị France, nke megidere nkwupụta na nkuzi onye nkuzi ya na e gburu ụmụaka niile nke Louis XVI na Marie Antoinette. Anderson jụrụ onye nkụzi ya, na-ekwusi ike na ọhụụ ya ekpughela ihe ga-abụ ọnọdụ ụmụ eze. Ihe omume a abụghị naanị ime ka Anderson nwee nsogbu na ndị ọgbọ ya, mana onye ndụmọdụ ụlọ akwụkwọ gwara ya ka ọ nweta nlebara anya. Anderson nwere ule nyocha dị iche iche na Katọlik Charities Mental Health Center tupu ọ nata nchoputa nke isi ọgụgụ isi. Mgbe ọhụụ ya akwụsịghị n'agbanyeghị ọgwụgwọ, a gwara nne na nna Anderson ka a nabata ya na Central Islip State Hospital dị na New York, ụlọ ọgwụ psychiatric. Otú ọ dị, mgbe ya na Anderson zutere, onye ọkà mmụta sayensị na ụlọ ọgwụ siri ọnwụ na ọ bụghị nanị na ekwesighi ịbanye afọ iri na isii n'ụlọ ọrụ dị otú a, kama na ọ tara ahụhụ ọ bụla karịa nzaghachi nrụgide nke nrụgide nkịtị nke oge uto. A tụrụ aro ka ewepu Anderson na ụlọ akwụkwọ obere oge iji gbakee. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, Anderson were ọrụ dị ka onye na-agbanwe agbanwe, nke ọ na-achịkwa ruo ọtụtụ afọ; otu o sila dị, nkwukọrịta ya na ọhụụ ya nọgidere. N'adịghị ka a zutere ya na mwakpo nke ekweghị ekwe, Anderson gbalịsiri ike ịghọta ikike ya n'oge ọ dị afọ iri na ụma na nwata (Anderson na Barone 1999; "Meet the Legendary Medium George Anderson" nd). Agbanyeghị, mgbe Anderson ruru afọ iri abụọ, ọ malitere ịtụle ahụmịhe ya na mmụọ ya, na, na 1973, ọ sonyeere otu ndị otu mpaghara raara nye ikike mmụọ ebe o kwuru na ọ nụchara ọrụ ya. Na 1978 ndụ ya bịara na mgbanwe mgbe ọ matara ihe ọ bịara tụlee ọkpụkpọ ndụ ya. Na agbamume nke ezigbo enyi, ọ malitere iji ikike ya nyere ndị ezinụlọ na ndị enyi nke onye ahụ nwụrụ anwụ aka ka ha na mmụọ nke ndị ha hụrụ n'anya kwurịta okwu (Hornberger 2004: 17; Buckland 2005: 6).
Site na ọnụego ziri ezi nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent iri asatọ na ise, Anderson dọtara uche dị ukwuu ma n'oge na-adịghị anya ọ na-agụ "ọgụgụ" ọ bụghị naanị ndị agbasasịrị agbata nke obodo ya, kamakwa ọtụtụ ndị na-eru uju ndị kwere na onyinye ya ma chọọ ọrụ ya. Na 1980, ọrụ Anderson malitere ịmalite mgbe a kpọbatara ya na onye nta akụkọ na onye nchọpụta paradaormal, Joel Martin. Anderson pụtara na Martin kwuru okwu na redio, Joel Martin Gosi, n'October nke 1980 wee duzie ọgụgụ na Martin onye nwere obi abụọ mgbe ọ kwenyere na ya ziri ezi nke na ọ gbanwere mkpebi ya na paranormal. Mgbe nke ahụ gasịrị, Martin gosipụtara Anderson ugboro ugboro The Joel Martin Gosi , bụ ebe ọ ga-enye ndị na-ege ntị na-agụ akwụkwọ na ikuku. Anderson ghọrọ onye ọbịa na-ewu ewu na-ekwu okwu ngosi na ọnụ, na duo dọtara nlebara anya na, na 1981, ha malitere ịkwado mmemme mmemme telivishọn akpọ Ọwa nke uche na ntanetị USB Viacom (ugbu a CBS). A nabatara usoro ihe omume nke izu ụka, nke nọgidere na-arụ ọrụ n'oge niile nke 1980s. Ka ọ na - ewu ewu, oge ichere maka tiketi ndị na - ege ntị na - arị elu ruru ihe dị ka afọ abụọ. Ọwa nke uche gosipụtara George George nke ndị so na-ege ntị, ọtụtụ n'ime ha ka edepụtara ma bipụtara na Joel Martin na akwụkwọ Patricia Romanowski na 1987 Anyị Anwụghị : Mkparịta ụka George Anderson na Akụkụ Ọzọ .
Ọhụhụ Anderson gara n'ihu na-eto na 1990s, ọ bụ n'ihi ọganiihu nke Anyị Anwụghị. Martin na Romanowski dere akwụkwọ abụọ na-esochi nke Anderson gụrụ. Anyị Echefubeghị: Ozi George Anderson nke Lovehụnanya na Olileanya si n'akụkụ nke ọzọ bipụtara na 1991, na Childrenmụ Anyị Ruo Mgbe Ebighị Ebi: Ozi George Anderson sitere na Childrenmụaka si n'akụkụ nke ọzọ ebipụtara na 1996 (Hornberger 2004: 17; "Joel Martin" nd). N'oge a, Anderson guzobere otu nzukọ, George Anderson Grog Nkwado Mmemme, nke mere ka ọrụ ya nwee ike ịnweta karịa na 1995 ndị ​​otu ezinụlọ Anne Frank kpọrọ ya ka ọ kpọọ ya na Holland ka ha duzie ndị nwụrụ na Oké Mgbukpọ ahụ; ma, nkọwa banyere nzute dị ụkọ.
Anderson jikọtara ya na onye isi oche nke George Anderson Grog Nkwado Mmemme, Andrew Barone, ịnye ndị ọzọ akwụkwọ atọ, gụnyere New York Times kacha ere Ihe mmụta George Anderson na Ìhè , na 1999. Ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ ahụ mere ka Anderson ruo ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị onye a ma ama na mba ụwa, o mekwara ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi n'ime afọ ndị sochirinụ, gụnyere telivishọn pụrụ iche akpọrọ Kpọtụrụ: inggwa Ndị Nwụrụ Anwụ Okwu na 2001. Usoro ihe omume ahụ, nke e gosipụtara na ABC, gosipụtara ọgụgụ na ndị a ma ama dị ka Vanna White na Bret Hart (Vaughan na Porche 2005, 45). Anderson enwetala nnukwu ọkwa ama ama na Europe na South Africa na Eshia yana United States. (Buckland 2005: 7).
N'ebe kachasị mkpa, George Anderson na-ekwupụta nkwenkwe ime mmụọ atọ: ndụ mgbe a nwụsịrị, ụmụ mmadụ nwere mkpụrụ obi dị iche na ahụ, ndị ahụ ka dị ndụ nwekwara ike ịkọrọ onye nwụrụ anwụ site na ndị na-ajụ ase. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị kwere ekwe na-ewere ọkara nke Anderson na ikike niile yiri ya dị ka onyinye Chineke nyere, Anderson, na-ekwenye na ọ bụ ikike pụrụ iche ma dị obere, na-ekwusi ike na ọ sitere na "ịmalitegharị" ụfọdụ mpaghara ụbụrụ na-eso ọrịa ọrịa nwata (Reed 1999; " Zute Legendary Medium George Anderson ”nd). Ọzọkwa, Anderson na-egosipụta ọdịiche doro anya n'etiti ọrụ ya na ikike ndị ọzọ karịrị nke mmadụ, dị ka ịkọ nkọ na ịkọwa okwu, na-ekwupụta na ahụ ya bụ naanị ngwa ọrụ na-eme ka mkpụrụ obi dị njikere iji soro ndị dị ndụ na-ekwurịta okwu. Ọ bụ ezie na a zụlitere Anderson na ọdịnala Roman Katọlik ma kwenye na mmetụta ndị Kraịst, nkọwa nkọwa Akwụkwọ Nsọ, na nkwenye na Chineke, ọ kwadobeghị nkwenye ọ bụla akọwapụtara nke ọma banyere ọrụ na ọdịdị nke Chineke (Anderson nd ). N'otu oge ahụ, Anderson enyela nkọwa doro anya banyere ihe ọ na-ewere dị ka ndụ mgbe a nwụsịrị; otu nke na-agbasakarị n'echiche ọdịnala Ndị Kraịst banyere Eluigwe.
Dị ka Anderson si kwuo, ozi niile ọ na-akọwa banyere ndụ mgbe a nwụsịrị sitere na mkpụrụ obi ya na ya na-ekwurịta okwu. Ọ na-ekwu na mgbe ọnwụ nke ahụ gasịrị, mkpụrụ obi na-esi n’olulu gaa n’ọnọdụ dị iche nke ịmara. Mgbe ha n’enwe mmetụta nke iweli elu ma-ọbụ enye ihe ọmụma, nke ọtụtụ na-agbagọ na mbuli-elu nke mkpụrụ-obi n’ime Elu-igwe nke dị n’elu elu-igwe, elu-igwe nke mụọ na-agakọ na mbara-igwe nke ụwa, na “mbugharị” dị iche. Mpaghara ime mmụọ nwere ọkwa dị iche iche, nke abụọ n'ime ha bụ ọkwa gbara ọchịchịrị, nke ọtụtụ na-ahụ dịka Hel ma ọ bụ pọgatrị. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mkpụrụ obi yiri ka ha na-agabiga ọkwa ndị a ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ bụghị ozugbo, ụfọdụ mkpụrụ obi, ọkachasị ndị mere ihe ọjọọ na ndụ ma ọ bụ gbuo onwe ha, nwere ike ịnọ ọdụ na ọkwa abụọ a.
Dabere na Anderson, mkpụrụ obi nọ n'okpuru "ikpe" otu odi, n’adighi ka atumatu ndi Kristain, atumatagh uzo Chineke site na nkpuru obi ya, kama obu ihe nke onye obula. Ozugbo nkpuru obi rutere na ndụ mgbe a nwụsịrị, ọ ghaghị ịnakwere omume e mere mgbe ọ nọ na mpaghara anụ ahụ, njirimara ya na nke adịghị mma, ma chọọ inwe ọganihu n'ụzọ ime mmụọ. Anderson na-ekwu na, dị ka ụwa, mmụọ na ndụ mgbe a nwụsịrị nwere ọrụ na ọrụ ha ga-arụ, gụnyere inyere mkpụrụ obi ndị ọzọ aka ịgafe. Ọrụ ndị a na-eme ka mkpụrụ obi mmadụ nwee ọganihu ma ruo ogo ọkwa dị elu. Ozugbo ị banyere n'ọkwa dị elu, mkpụrụ obi nwere ike ịga njem na uche ya gbadata site na ọkwa dị ala, ma na-ahọrọkarị ime nke a iji nọrọ na onye ị hụrụ n'anya, dịka onye òtù ezinụlọ ma ọ bụ ezigbo enyi si mpaghara anụ ahụ, onye na-enweghị ma enwetara ọnụ ụzọ dị elu.
Ọ bụ ezie na mkpụrụ obi adịghị enwe ọdịdị anụ ahụ nke anụ ahụ, ma si otú ahụ apụtaghị na ndụ mgbe a nwụsịrị dị ka ọ dị n'ụwa, ndị mmụọ ndị ọzọ nwere ike ịmata ya site na ụdị ya dị iche. Ya mere, ndi di nso na onye no na ndu ha nwere ike inagide ya na mmuo. Dabere na Anderson, mkpụrụ obi ndị enyi na ndị otu ezinaụlọ na-echekarị ikele onye nwụrụ anwụ ọhụrụ ka ọ na-abanye na ndụ mgbe a nwụsịrị. Mkpụrụ obi a na-akpọghachi ga-anọkọ ọnụ na mpaghara ọzọ, n'agbanyeghị na mgbochi nke ọrụ na-apụkarị ma ọ bụ gbanwee. Dịka ọmụmaatụ, mkpụrụ obi nke nne na nwa nwoke agakwaghị ele onwe ha anya otu a, kama ọ bụ naanị mmụọ abụọ n'otu "vibration" (nke Martin na Romanowski kwuru: 1987: 226). Agbanyeghị, Anderson na-ekwu na mmụọ nwere ikike ịpụta na anụ ahụ, nke a pụrụ ịmata nke ọma n'oge a na-agụ akwụkwọ iji soro ya na ndị ha na ha na-ekwurịta okwu kwurịta okwu.
Anderson ekwetawokwa ikike nke mkpụrụ obi ịlaghachi n'ime ụwa nkịtị wee bie ọtụtụ ndụ. Dị ka Anderson si kwuo, ka ọtụtụ na-eche ruo mgbe ha ruru ogo nke ọkwa dị elu ma nwee ọganihu n'ụzọ ime mmụọ ịbanye na ndụ na-esote, ndị ọzọ, ọkachasị ndị nwụrụ na mberede na atụghị anya, nwere ike ịhọrọ ịlaghachi na mpaghara anụ ahụ ozugbo. Ozokwa, dika nkpuru obi na ala ime mmuo ga-anọnyere ndi ha na ha ha na ha di nso na ndu, ha na ha ga-ebikọ ọnụ na-esote oge, “ilaghachi” dika ndi ezi na ulo ma obu ndi enyi. N’ikpeazu, Anderson kwuputara na n’agbanyeghi na ihe nmuta nile d’ala ime mmuo bu nke aka ha, imirikiti n’ime mmuo ndi ya na ha kparitaputala na-enwe obi uto, obi iru ala, na imata nke onwe.
Mmemme Nkwado George Anderson iru uju na-enye ụdị nghọta dị iche iche dị iche iche: nkeonwe, otu, na nnọkọ ekwentị. A na-eme nnọkọ nzuzo na nke otu n'otu ụlọ nzukọ nke otu họtel na Commack, Long Island. N'ụbọchị ọgụgụ, a gwara ndị ahịa ka ha chere n'ọnụ ụlọ nkwari akụ ahụ ruo mgbe Anderson dị njikere ịmalite. Otu onye ọrụ na-ezute ndị ahịa n'ime ọtụtụ nkeji ma zaa ajụjụ ọ bụla tupu ọ duru ha gaa n'ụlọ nzukọ iji malite nnọkọ ahụ. Dị ka Anderson si kwuo, ọ bụ ezie na oge kwa nnọkọ nzuzo dịgasị iche dabere na nkwukọrịta sitere na mmụọ, ịgụ akwụkwọ na-adị ihe dị ka nkeji iri ise na elekere. Maka ego nke $ 1,200, otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ nwere ike ịga nnọkọ nzuzo, na-enweghị ụgwọ mgbakwunye maka ụmụaka nọ n'okpuru afọ iri na isii. Ihe ọzọ na narị ise dollar na-ekweta onye nke atọ, na ezinụlọ nke ruru mmadụ isii nwere ike ịrịọ a ọgụgụ nkeonwe maka $ 2,000 ("Oge Nzuzo") Otu nnọkọ na-enye ndị mmadụ ma ọ bụ di na nwunye ohere ịnata "obere-agụ," nke na-adịgidekarị banyere nkeji iri na ise na iri abụọ, n'ime nhazi otu. A na-ahazi otu dị iche iche aha site na isiokwu, dị ka nne na nna ụmụ ha nwụnahụrụ, ma ọ bụ ka mma; ya mere, nha otu dịgasị iche dabere na ohere, mmasị, na oke oge. Anderson na-akwụ $ 400 ụgwọ maka obere oge ọ bụla n'ime otu ọgụgụ otu, ma nke ọ bụla nwere mmachi na otu ma ọ bụ mmadụ abụọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na mmadụ abụọ na-abịa, a chọghị ka ha bụrụ ndị ikwu na iwu; otu o sila dị, ha aghaghi icho mkparita uka site na otu nkpuru obi ahu (“Oge Obere Otu” nd). Oge nke telefon dị maka ndị amachaghị ikike ịga njem, enwere ike ịtọ ya na mba ụwa. Oge ndị a dị ka nnọkọ nkeonwe na ogologo ma na-efu $ 1,200 ("Oge ekwentị" nd).
N'agbanyeghị ọdịiche dị iche iche nke nhazi n'etiti nnọkọ, Anderson akọwaala ma gosipụta usoro otu usoro nke ịgụ ihe na-eme. Tupu nnọkọ ahụ, Anderson na-atụ aro ka ndị niile na-achọ ịkpọtụrụ buru ụzọ nata ọnwụ nke onye ha na ha chọrọ ịgwa okwu. Dị ka Anderson si kwuo, ọ bụ ezie na ndị mmụọ nwere ike ịkpọtụrụ ozugbo ha banyere n'ógbè ime mmụọ, nkwukọrịta na-adịkarị irè ma baa uru mgbe onye mmadụ nwụnahụrụ rutere ogo nke nghọta ọnwụ ya. Ọzọkwa, na-ekweta na, n'ihi nsogbu mmetụta uche, ọ na-esikarị ike nghọta nke ọma ihe mmụọ ndị ahụ na-anwa ịkọrọ dị ka nnọkọ a na-eme, a na-agba ndị ahịa ume ka ha mee ndekọ ọdịyo nke ọgụgụ; ka amachibidoro, itinye vidio vidio na ihe omume ahụ amachibidoro.
Nkwupụta nke onwe ndị ahịa nyere ụfọdụ nghọta banyere ịga n'ihu nke otu oge nghọta. Anderson ga- na-ebido ọgụgụ site n'ịgụ ekpere dị nkenke na iburu mkpịsị edemede na mpempe akwụkwọ. Mgbe ahụ, ọ ga-amalite ibugharị mkpịsị akwụkwọ ahụ n’elu akwụkwọ ahụ dị ka a ga-asị na ọ na-agba ọsọ ngwa ngwa na ibe ahụ, mana ọ naghị emetụ mpempe akwụkwọ ahụ aka ma ọ bụ hapụ akara ọ bụla. Ọ na-ekwusi ike na nke a na-enye ya ohere ịme ka ike nke mmụọ dịkwuo mma. Mgbe ahụ ọ na-agwa ndị ahịa ka ha zaa naanị ee "ee" ma ọ bụ "ee e" n'okwu ndị mmụọ kwuru n'oge niile, na-akọwa na mkpụrụ obi ọ bụla maara na onye nọ na mpaghara anụ ahụ na-anwa ịkọrọ ya ma ghọta ihe onye ahịa ahụ kwuru kwesịrị ịnụ uru iji kọntaktị ahụ. Ya mere, dị ka Anderson na-akọwa, "naanị okwu ị kwesịrị ikwu na nnọkọ bụ na ị ghọtara ozi ndị ndị ị hụrụ n'anya na-agwa gị" ("Ajuju Ajuju A Na-ajụkarị" nd; Filius 2001).
Anderson atụlee mmalite nke nnọkọ ahụ, nke mkpụrụ obi na-ebu ụzọ kpọtụrụ ya, na foto Polaroid. N'ime ntakịrị oge, ihe osise nke mkpụrụ obi na-anwa ịkọrọ mmadụ ihe na-apụtawanye ìhè, ruo n'ókè nke na a ga-akọwara ya onye ahịa ya. Anderson ga - ebido gosipụta mmụọ n'ụzọ doro anya, dị ka okike ma ọ bụ mmekọrịta ya na onye ahịa, ruo mgbe onye ahịa ahụ nwere ike ịchọpụta mkpụrụ obi na - anwa ịkpọtụrụ. Nkọwa nke Anderson ga-apụtakarị akọwapụtara ka nnọkọ ahụ na-aga n'ihu, na-enyekarị aha ma ọ bụ ihe kpatara ọnwụ. Oge ga-ejedebe site na ozi sitere na mkpụrụ obi, nke ọdịdị ya na-abụkarị nke nkasi obi ma ọ bụ mmesi obi ike na ọ banye na ndụ mgbe ọ nwụsịrị ma nwee udo.
George Anderson malitere inwe nnọkọ ọgụgụ nzuzo na 1978 mgbe, mgbe ọtụtụ afọ nke inwe obi abụọ na obi abụọ, ọ a kọrọ na ọ malitere ịkọwa ikike ya n'ụzọ ime mmụọ. O nwetara ngwa ngwa dị ukwuu ma lelee ihe ngosi telivishọn nke akpọrọ Ọwa nke uche n'akụkụ Joel Martin n'oge niile nke 1980s. Usoro ihe omume ahụ gosipụtara nghọta na ndị na-ege ntị na ndị na-akpọ oku ma kpọọ ndị ọbịa nọ n'ọhịa, dịka ndị na-ajụ mmụọ, ndị mmụọ, na ndị na-arụ ụka. Ihe nkiri ahụ nwetara nlebara anya ozugbo, na nke kachasị elu ya n'etiti etiti 1980, turu ọnụ maka afọ abụọ maka tiketi ndị na-ege studio (“Joel Martin” nd). Mgbe ha chịkọtara ọtụtụ afọ nke ndekọ nke usoro ịgụ ihe n'etiti Anderson na ndị otu na-ege ntị na ndị ahịa onwe ha, Martin na Patricia Romanowski depụtara akwụkwọ akpọrọ Anyị Anwụghị: Mkparịta ụka George Anderson na Akụkụ Ọzọ. Ihe ịga nke ọma nke akwụkwọ ahụ kpatara njem zuru ụwa ọnụ, yana Anderson na-egosi na okwu telivishọn dị ka Larry King Live na Ndụ na Regis & Kathy Lee. Mgbe ọ lọtara njem ahụ, Anderson laghachiri na elekwasị anya wee malite ịnọrọ nzukọ ọmụmụ naanị onwe ya na nzukọ ya George Anderson Mwute Nkwado Mmemme (Buckland 2005: 7). Akwụkwọ abụọ Martin na Romanowski ndị sochiri, nke e bipụtara na 1990s, gara n'ihu ịdọrọ uche ndị na-ajụ ase.
Na Septemba 1, 1997 George Anderson Mwute Mmemme Nkwado wepụtara websaịtị, georgeanderson.com, nke mere Ọrụ Anderson nwere ọtụtụ ebe-dị. N’ime ọnwa izizi emere, ọrụ “Jụọ George Anderson” webụsaịtị ahụ nwetara ihe ruru otu puku ajụjụ ndị mmadụ gbara gburugburu ụwa. N’ime otu afọ, webusait enwetala ozi karịrị puku iri ise, ajụjụ, na ihe si mba iri anọ. N'ime afọ ise, ihe ruru ọkara nde mmadụ abanyela na saịtị ahụ. Taa George Anderson Mwute Mmemme Nkwado na-arụ ọrụ n'ọfịs abụọ, nke abụọ dị na New York, n'okpuru Anderson n'onwe ya na onye isi oche Andrew Barone. Ọ na-ewe ndị ọrụ iji zaghachi "oku ekwentị 800, ozi ịntanetị 1,200, na leta 200" a na-enweta kwa izu; jikwaa weebụsaịtị weebụsaịtị; ma nye ndị na-akpọ oku oku oku oku ("Ajuju Ajuju Ajuju"). N'agbanyeghị ọdịdị ya na 2001 ABC Special, Kpọtụrụ: inggwa Ndị Nwụrụ Anwụ Okwu , dị ka weebụsaịtị nke Anderson si kwuo, ọ naghị eme mgbasa ozi ọ bụla ugbu a ma ọ bụ na-agụ akwụkwọ ọha na eze. Kama nke ahụ, ọ na-enye naanị nnọkọ nzuzo, ekwentị, na otu otu akọwapụtara na saịtị ahụ ("Kpọtụrụ Mmemme Office" nd).
Ọbụna tupu mmalite nke ọrụ ya, George Anderson zutere ya ugboro ugboro na ihe ịma aka nke izi ezi nke ikike ya. N'ịbụ onye ndị mụrụ ya, ndị ọgbọ ya, na ọtụtụ ndị ọchịchị nwere obi abụọ n'oge ọ bụ nwata na afọ iri na ụma, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Anderson nọ n'ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọrịa uche ma gwọọ ya maka ịme ihe. Otú ọ dị, ọhụụ ya akwụsịghị, ha mesịkwara mee ka ọrụ na esemokwu na inwe obi abụọ jupụta. Nkatọ kachasị na-agbagha ikike Anderson bụ na ọgụgụ ya na-abụkarị ihe edoghị anya, ma ọ bụ na-ezighi ezi, ka a gụọ dị ka ihe ziri ezi. Ndị ahịa gara aga yana ndị na-arụ ụka n'ozuzu ebubo boro Anderson na ọ ga-enweta ozi gbasara ndị ahịa tupu agụ ya, dị ka onye nyocha nke paranormal na onye nwere obi abụọ Gary Posner kwuru, jiri usoro ọgụgụ ya tụnyere "igwu egwu" ụdị egwuregwu nwatakịrị ahụ 'Hot and Cold' na '20 Ajụjụ' ”(Posner 2006). Ọzọkwa, ọ bụ ezie na Anderson na-azọrọ na ya agabigala ma gafee usoro nyocha sayensị, ọtụtụ ndị ajụla izi ezi nke ndị sayensị na usoro ejiri nweta nsonaazụ dị otú ahụ. Na 2003, Kọmitii nke Nyocha Skeptical, otu nzukọ raara nye nchọpụta paranormal, bipụtara otu isiokwu akpọrọ “Otu esi anwale ule, ịkatọ ihe ndị a na-eme mgbe a nwụsịrị,” na-akatọ usoro nke prọfesọ Mahadum Arizona bụ Gary Schwartz na ndị ọrụ ibe ya nwalere ma kwenye na ikike paranormal nke ọtụtụ ndị na-ajụ ase, gụnyere George Anderson (Hyman 2003).
Na nzaghachi nke inwe obi abụọ banyere izi ezi nke ikike ya, Anderson na-arụ ụka na ọtụtụ ndị na-enwe obi abụọ banyere ịjụ ase na-esokwa otu nghọtahie ahụ: na ịkọrọ mpaghara ime mmụọ bụ usoro na-adịghị agha agha. N'aka nke ozo, dika Anderson na-agaghachi, enwere otutu ohere maka nkwuputa okwu site na njehie mmadu na nke onye ahia ya na n'ihi na otutu ozi o na-anata site na mmuo di na akara, onyonyo, na nkpuru, karia okwu. Yabụ, ọ na-esikarị ike ịgwa onye ahịa ahụ kpọmkwem ihe mmụọ nsọ na-agwa. Dịka o metụtara, Anderson ejiriwo ihe atụ jiri ike ya tụnyere nke onye na-agba ọsọ, na-ekwupụta na “oge ọ bụla onye na-egwu bọọlụ gbagoro n’elu efere ahụ, ọ naghị akụ ọsọ n’ụlọ. Mana nke ahụ apụtaghị na ọ nweghị ike ịgba bọl ”(nke Reed 1999 kwuru). Ọzọkwa, ịgbagha azọrọ na ọ na-enweta ozi gbasara ndị ahịa tupu agụ ya, ọ na-ekwusi ike na Mmemme Nkwado George Anderson Grief na-ewere usoro iji mee ka ndị ahịa zoo aha ha. Anderson na-akọ na a na-eme nke a site na iji nọmba ndị ahịa dochie aha ya mgbe emechara nhọpụta; ya mere, ọ nweghị ohere ịnweta aha ndị ahịa n'oge ọ bụla tupu, n'oge, ma ọ bụ mgbe nnọkọ ahụ.
N'ikpeazụ, a kpalitewo nchegbu banyere ihe ụfọdụ weere dị ka ihe na-ekwesịghị ekwesị ka usoro ịgụ ihe na-efu ha. Na nzaghachi, nzukọ ahụ na-ekwu na n'ihi ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-achọ ịgụ site na Anderson na ịkpọtụrụ nzukọ ahụ ajụjụ na nchegbu, ọ ga-enwerịrị ndị ọrụ oge niile. Ọzọkwa, Anderson nwere oke njedebe na ọgụgụ ole ọ nwere ike iduzi kwa izu. Ọ bụ ezie na nzukọ ahụ na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ ugbu a maka iwelata ọnụ ọgụgụ ọgụgụ nke onwe, ọnụ ahịa dị ugbu a n'otu oge ọ dị mkpa iji kwado nzukọ ahụ ("Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị," nd). N'agbanyeghi otutu nkatọ, nkatọ, na nsogbu chere George Anderson iru uju Nkwado Mmemme, nzukọ na-aga n’ihu na-eme nke ọma ka Anderson na-azọrọ na ya duziri ihe karịrị 30,000 agụ n’oge nile nke ya ọrụ (“Meet Legendary Medium George Anderson” nd).
Anderson, George. nd “Nke gara aga nwụnye.” Jụọ George Anderson. George Anderson Mwute Nkwado
Programs. Nweta site na http://www.georgeanderson.com/askgeorge2.htm na 17 February 2014.
Anderson, George na Andrew Barone. 2001. Ije Ije na Ubi Mkpụrụ Obi. New York: Putmụ GP Putnam.
Anderson, George na Andrew Barone. 1999. Nkuzi site na Light: Ozi puta iche nke olile anya site n’akuku ozo. New York: Penguin Group.
Buckland, Raymond. 2005. Akwụkwọ Mmụọ: Encyclopedia nke Clairvoyance, Channeling, na Mmụọ
Communication. Canton: Visible Ink Press.
“Kpọtụrụ Mmemme Office,” nd George Anderson Mwute Nkwado Mmemme Nweta site na
http://georgeanderson.com/contactus.htm na 17 February 2014.
Filius, Charles A. 2001. “Ọgụgụ m site n’aka George Anderson.” Extralargemedium.net. Nweta site na
http://www.extralargemedium.net/georgeanderson.htm na 17 February 2014.
"Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị," nd George Anderson Mwute Nkwado Mmemme. Nweta site na
Hornberger, Francine. 2004. Kasị Uche Ọkachamara Worldwa. New York: Mbipụta Kensington.
Hyman, Ray. 2003. "Otu esi anwale ule: ịkọcha nnwale nke ndụ mgbe a nwụsịrị." Kọmitii maka
Enyo enyo. Nweta site na http://www.csicop.org/si/show/how_not_to_test_mediums_critiquing_the_afterlife_experiments na 17 February 2014.
"Joel Martin: Onye na-ere akwụkwọ kacha mma na Paranormal Journalist." nd MargaretWendt.com. Nweta site na
http://margaretwendt.com/joel_martin.php na 17 February 2014.
Martin, Joel na Patricia Romanowski. 1988. Anyị Anwụghị: Mkparịta ụka George Anderson na Akụkụ Ọzọ. New York: Penguuin.
"Zute Medium Ọkara George Anderson," nd George Anderson Mwute Nkwado Mmemme. Nweta
si http://www.georgeanderson.com/georgeandersonbio.htm on 17 February 2014 .
Porche, Jean na Deborah Vaughan. 2005. Psychics & Ọkara na Canada. Ontario: Dundurn Press.
Posner, Gary P. 2006. “'Nsochi dị nso na ụdị aka abụọ' na 'Psychic Medium' George
Anderson. ” Tampa Bay Skeptics . Nweta site na
"Oge nke Onwe," nd George Anderson Iru uju Mmemme. Nweta site na
http://georgeanderson.com/privatesessions.htm na 17 February 2014.
Reed, JD 1999. "N'akụkụ Nnukwu Nkewa ahụ." ndị mmadụ. Nweta site na
http://www.people.com/people/archive/article/0,,20129566,00.html na 17 February2014.
“Oge Obere Otu.” nd George Anderson Iru uju Mmemme. Nweta site na
"Oge ekwentị." nd George Anderson Mwute Nkwado Mmemme. Nweta site na
Williams, Kevin. nd “George Anderson,” Na Nso Nsogbu Ọnwụ na Ndụ Mgbe A nwụsịrị. Nweta site na
http://www.near-death.com/index.html#.UwKlXrRlp_c na 17 February 2014.
George na Anderson Njikọ vidiyo